Ngalaba Na Site Linux
Site na Linux ọ bụ blọọgụ gị ugbu a ebe ị ga-ahụ ihe niile metụtara ụwa Linux. Na mgbakwunye, dịka ị nwere ike isi na aha ya pụta, ị ga-ahụkwa nkuzi, akwụkwọ ntuziaka na ntụzi ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ọ bụla sitere na Linux, nke ga-enyere gị aka ichefu usoro sistemụ ndị ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ "switcher".
N'ihi na Google kpebiri ịdabere na sistemụ arụmọrụ ya na Linux, blọọgụ a nwekwara ozi metụtara ụwa gam akporo. Akụkọ a bipụtara na Site Linux na-anakọta ozi metụtara ndị a ma ama na Linux, gụnyere Linus Torvalds, onye kere, na-azụlite ma na-ejikwa kernel nke usoro Linux ọ bụla.
N'etiti ngwa ndị anyị na-atụle na blọọgụ a, anyị nwere imewe, mmemme, ngwa ọdịnala ọtụtụ ma ọ bụ, n'ezie, egwuregwu. Have nwere ndepụta nke Site na Linux ngalaba dị n'okpuru. Nke anyi otu ederede bụ ọrụ maka ịkwado na imelite ha kwa ụbọchị.
Ọdịdị / Nhazi
Faịlụ FileLet jiri
Netwọk / Sava
Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ihe ntinye ederede WordPress
Nkuzi nke WordPress